သူမရဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရိုင်းစိုင်းစွာ ဝေဖန် တိုက်ခိုက်သူနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ – Cele Posts
“ဝိညဉ်ရှိုက်သံ”ဇတ်လမ်းတွဲ မှာ ကြယ်စင်ချိုလေး အဖြစ်နဲ့ ပရိသတ် တွေရဲ့ရင်ထဲမှာ အခိုင်အမာ နေရာယူထားနိုင်တဲ့ ကောင်မလေး ဆောင်းဝတ်ရည်မေ ကတော့ “အမုန်းမှသည်” ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာလည်း နေချိုသွေးဆိုတဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို ထပ်မံ ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေချိုသွေးက လက်ရှိမှာလည်း သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ရင်း ပရိသတ်တွေအတွက် မရိုးနိုင်တဲ့ ကာရိုက်တာတွေမှာ သရုပ်ဆောာင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိန်ပိန်သေးသေး ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်ကတော့ နာမည်ရနေတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပီပီ ဒီတစ်ခါမှာလည်း အမေမွေးထားတဲ့ ပင်ကိုယ်ရုပ်ရည်နဲ့ ပက်သတ်ပြီး ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း တိုက်ခိုက် ဝေဖန်သူနဲ့ ကြုံဆုံနေရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ထိုလူက ဆောင်းဝတ်ရည်မေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအောက်မှာ “မေးစေ့ Vshape လုပ် နှူတ်ခမ်း filler ထိုး.. Original face- Am Iajoke to you ? :”) Your birth face was already perfect ပါ။ Filler and some treatments are not needed for you” ဆိုပြီး စကားနာထိုးခံခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ဝေဖန်မှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဆောင်းဝတ်ရည်မေက ” သေချာကြည့်ပြီးမှ မသိပဲ ရမ်းသမ်းမပြောနဲ့ ။ မသိပဲလာပြောရင် ဟာသဖြစ်တယ်။ ကျွန်မက ကျွန်မ မျက်နှာပြင် ထားပါတယ်လို့ ပြောထားမိလို့ ဒီလိုစကားတွေလာပြောနေရတာလား? ?? ပြောချင်ရင် မျက်နှာကို ဟိုပြင်ဒီပြင်လုပ်ထားတဲ့ သူတွေရဲ့ ပုံအောက်ပဲ အဲ့လိုသွားရေးပြီးဆရာလုပ်လိုက်နော်။” ဆိုပြီး တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဆောင်းဝတ်ရည်မေ ကတော့ တော်ရုံဆိုရင် ဝေဖန်မှုတွေကို လျစ်လျူရှုထားလေ့ ရှိပေမယ့် အခုလို ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောဆို မှုကိုတော့ ပြန်လည် တုံ့ပြန်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ရုပျရညျနဲ့ပတျသကျပွီး ရိုငျးစိုငျးစှာ ဝဖေနျ တိုကျခိုကျသူနဲ့ ကွုံခဲ့ရတဲ့ ဆောငျးဝတျရညျမေ
“ဝိညဉျရှိုကျသံ”ဇတျလမျးတှဲ မှာ ကွယျစငျခြိုလေး အဖွဈနဲ့ ပရိသတျ တှရေဲ့ရငျထဲမှာ အခိုငျအမာ နရောယူထားနိုငျတဲ့ ကောငျမလေး ဆောငျးဝတျရညျမေ ကတော့ “အမုနျးမှသညျ” ဇာတျလမျးတှဲ မှာလညျး နခြေိုသှေးဆိုတဲ့ ကာရိုကျတာနဲ့ ပရိသတျတှေ ကို ထပျမံ ဖမျးစားနိုငျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ နခြေိုသှေးက လကျရှိမှာလညျး သူမဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျလကျ လုပျကိုငျရငျး ပရိသတျတှအေတှကျ မရိုးနိုငျတဲ့ ကာရိုကျတာတှမှော သရုပျဆောာငျဖို့ ကွိုးစားနသေူလေးတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပိနျပိနျသေးသေး ခန်ဓာကိုယျ လေးကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဆောငျးဝတျရညျကတော့ နာမညျရနတေဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျပီပီ ဒီတဈခါမှာလညျး အမမှေေးထားတဲ့ ပငျကိုယျရုပျရညျနဲ့ ပကျသတျပွီး ရိုငျးရိုငျးစိုငျးစိုငျး တိုကျခိုကျ ဝဖေနျသူနဲ့ ကွုံဆုံနရေတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ထိုလူက ဆောငျးဝတျရညျမရေဲ့ ဓာတျပုံတှအေောကျမှာ “မေးစေ့ Vshape လုပျ နှူတျခမျး filler ထိုး.. Original face- Am Iajoke to you ? :”) Your birth face was already perfect ပါ။ Filler and some treatments are not needed for you” ဆိုပွီး စကားနာထိုးခံခဲ့ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒီလို ရိုငျးရိုငျးစိုငျးစိုငျး ဝဖေနျမှုနဲ့ ပကျသတျပွီး ဆောငျးဝတျရညျမကေ ” သခြောကွညျ့ပွီးမှ မသိပဲ ရမျးသမျးမပွောနဲ့ ။ မသိပဲလာပွောရငျ ဟာသဖွဈတယျ။ ကြှနျမက ကြှနျမ မကျြနှာပွငျ ထားပါတယျလို့ ပွောထားမိလို့ ဒီလိုစကားတှလောပွောနရေတာလား? ?? ပွောခငျြရငျ မကျြနှာကို ဟိုပွငျဒီပွငျလုပျထားတဲ့ သူတှရေဲ့ ပုံအောကျပဲ အဲ့လိုသှားရေးပွီးဆရာလုပျလိုကျနျော။” ဆိုပွီး တုံ့ပွနျခဲ့ပါတယျ။
ဆောငျးဝတျရညျမေ ကတော့ တျောရုံဆိုရငျ ဝဖေနျမှုတှကေို လဈြလြူရှုထားလေ့ ရှိပမေယျ့ အခုလို ရိုငျးရိုငျးစိုငျးစိုငျးပွောဆို မှုကိုတော့ ပွနျလညျ တုံ့ပွနျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီး အားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ပရိသတ်တွေ သဘောကျနေကြတဲ့ ရန်ရန်ချမ်းတို့ရဲ့ ချစ်စရာ ငယ်ဘ၀ပုံရိပ်လေးတွေ